Shinoa Mampiaraka Ny Fahalalam-Pomba - Lalàna - Ny Fomba Amam-Panao - Fifandraisana
Shinoa Mampiaraka Ny Fahalalam-Pomba — Lalàna — Ny Fomba Amam-Panao — Fifandraisana
Sinoa mampiaraka ny fahalalam-pomba no iray amin’ireo fanta-daza indrindra ny fiarahana amin’ny kolontsaina eto amin’izao tontolo izao ny fifandraisana. Izy ireo dia samy hafa tokoa amin’ny fomba maro mampitaha ny mahazatra mampiaraka ny fahalalam-pomba amin’ny firenena Tandrefana, dia ny sisa amin’ny firenena any Azia Atsinanana. Mafy voasariky ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao, Sinoa manana ny fitsipiky ny mampiaraka. Ity, na izany aza, mbola matanjaka tsara izany andro nanosika nidina ny tanora ny antitra. Raha toa ianao mahalala na inona na inona momba izany, dia efa vonona ny hiditra tanteraka ny tontolo vaovao ny mampiaraka. Ity handeha aho mba hizara aminareo ny sasany ny fahalalam-pomba mahazatra mikasika ny fiarahana amin’ny Shinoa. Ny lehilahy sy ny vehivavy ao Shina manana be dia be ny tsindry mahazo manambady. Raha efa ao am-s ary mbola tokan-tena, izany dia antsoina hoe menatra ianao, ary na dia ny loza voajanahary. Izany no mahatonga ny»hosoka»olon-tiany sy ny ankizivavy fahita matetika any Shina. Satria ny tsindry mba hahita mpiara-miasa dia avo, Sinoa te-hahazo matchmaking. Ny mahazatra ny fomba ampiasaina miaraka amin’ny oniversite namana, mpiara-miasa ao amin’ny asa, na amin’ny alalan’ny aterineto fanompoana mampiaraka. Izany no tena fomba fijery ao Shina izay tanora maro ny olona miara-mipetraka eny amin’ny trano fisotroana kafe na trano fisakafoanana hanatrika matchmaking fivoriana. Mahalala fomba ny manan-danja eo amin’ny kolontsaina Sinoa. Noho izany, ny fahatsapana voalohany dia nandray anjara lehibe amin’ny fanohizana ny fifandraisana. Midera ny fijery ny vehivavy no tena mahazatra an’i Shina. Rehefa ny Tandrefana ny vehivavy te-hiverina ny tavany izy rehefa afaka ny olona dia midera ny hatsaran-tarehiny, ny vehivavy Shinoa dia tsy. Tiany fa rehefa ny olona hidera ny bika aman’endriny. Raha ny vehivavy any amin’ny firenena Tandrefana ho faly misafidy izay hohanina, vehivavy Shinoa miantehitra bebe kokoa ny lehilahy amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ity hitranga any saika ny fotoana rehetra toy ny manapa-kevitra izay mba hihinana sy nandidy ny sakafo. Tsy hoe izy ireo dia tsy ho afaka ny hanao ny fanapahan-kevitra, fa manahy izy ireo raha lehilahy, dia toy izany na tsia. Rehefa ny olona handray ny fitarihana, dia manandratra ny enta-mavesatra goavana eny an-tsorony, fa s Shinoa mampiaraka ny fahalalam-pomba ny Fomban-drazana mangataka vehivavy Shinoa mba ho saro-kenatra sy saro-kenatra, indrindra fa manoloana ny olona. Noho izany dia natombony ny resaka dia zavatra vehivavy Shinoa tsy manao. Izany ihany koa noho ny tahotra ny mampiseho be loatra ny tenany fa mety nahatonga ny olona mihevitra ratsy izy ireo. Amin’ny teny Sinoa mampiaraka ny fahalalam-pomba, ny olona hitondra ny fanaraha-maso. Araka ny voalaza teo aloha, ny vehivavy dia tsy mety loatra, misokatra manoloana ny olona. Izany no antony toy izany dia tsy miankina amin’ny foto-kevitra toy ny fidiram-bola, toe-piainana, velona ny fandaniana, ny olon-tiany teo aloha, ary ny sasany hafa tsipiriany resaka be tsy ho niresaka nandritra ny daty. Ankapobeny ny lohahevitra toy ny fianakaviana sy ny namana kokoa, nisafidy, na dia midera samy hafa ny endrika ivelany. Tsotsotra fivoriana uncommonly fanao ao Shina. Tanora efa nanomboka ny hanao izany, fa izany no mbola tsy azo ekena ao ny lehibe kokoa ny kolontsaina. Raha toa ny mpivady efa nihaona fanintelony na mihoatra, ny vehivavy dia mandray izany ho toy ny famantarana ny mahaliana, dia ny fahatsapana fa izy ireo no mety hahazo manambady. Sinoa mampiaraka ny fahalalam-pomba, koa dia tsy misy zavatra tsy misy dikany amin’ny teny Sinoa mampiaraka. Rehefa tia dia nilaza hoe:»malahelo anao aho»na»tiako ianao», ny vehivavy dia mandray izany ho zava-dehibe. Tsy misy amin’ny teny Sinoa nilaza ireo zavatra ireo avy ny fahazarana na ny maha-tsotra ny vazivazy. Ny mifanohitra amin’izany, dia noraisina ho toy ny taratry ny olona iray ny fo. Ao amin’ny kolontsaina Tandrefana, fampidirana sipa na ny olon-tiany ny ray aman-dreny dia fahita na inona na inona ny maha zava-dehibe ny fifandraisana.
Ny fandraisana ny mpiara-miasa sy mampahafantatra azy ireo ny ray aman-dreny ny haavon’ny taratra ny maha zava-dehibe ny fifandraisana. Rehefa mitranga izany, dia midika izany na ianareo dia vonona hivadika ho any amin’ny dingana manaraka: ny fanambadiana. Misy fomban-drazana ao Shina izay ray aman-dreny, sy amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, ray aman-drenibe dia tena tafiditra ao ny sasany mpivady lovey dove fifandraisana. Izany matetika no mitranga rehefa ny ray aman-dreny dia ilay iray izay nanangana ny fivoriana ho an’ny zanany. Raha tsy izany, dia misy ny vehivavy sasany ao Shina izay mifikitra amin’ny fomba amam-panao taloha izay izy ary ny mpiara-miasa hihaona ihany ao amin’ny toerana izay efa neken’ny ray aman-dreniny (sy ny raibe sy renibe) mialoha. Sary an-tsaina fotsiny ny fomba mahafinaritra ny toerana mety ho. Ao amin’ny kolontsaina Tandrefana, tsy afaka baomba ny mpiara-miasa an-jatony ny antso sy ny andinin-teny hafa rehetra ny ora. Na ny olon-kafa, dia mahazo tezitra sy fanariam anao ho amin’ny ratsy. Fa matokia ahy, izany dia zavatra mahazatra ao Shina. Izany dia azo ekena raha ny vehivavy handefa lahatsoratra na manao antso telo ora mialoha ny nandamina fivoriana. Ny tsindry avo ny fitadiavana mpiara-miasa ao amin’ny kolontsaina Sinoa niafara tamin’ny zavatra hafa: fironana ho an’ny vehivavy Shinoa hanambady tany am-boalohany. Noho ny kolontsaina-mirona, ny vehivavy iray ny ray aman-dreny sy ray aman-drenibe dia ireo izay mametraka ny tsindry atao amin’ny fanambadiana, na ny vehivavy irery dia vonona na tsia. Ny loholona ny olona te-hanorina ny vavy amin’ny anti-panahy, raha izy ireo azo antoka kokoa, hahazoana vola ampy, ary matetika hanana hoavy mamirapiratra. Vahoaka shinoa lanja ny ara-panambadiana ny fahamarinan-toerana mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra. Ny olona sasany ao Shina ny hanambady avy ny fiainana tsy hanahirana fa noho ny fitiavana. Izany no mahatonga ny ray aman-dreny koa dia toy ny nametraka ny zanany tao ny fivoriana. Tsy iraisana ny kolontsaina ao Shina antsoina hoe manambady tsena. Ary izany dia ara-bakiteny ny tsena, araka ny feno olona ary ho lehibe toy izany. Amin’ny sehatra kely toy ny, fivoriana manokana eo amin’ny ray aman-dreny mba large-scale fampirantiana an-jatony ireo mpandray anjara. Irery, ireo izay hahazo anjara tamin’ity hetsika ity ireo ray aman-dreny. Izy ireo matetika mipetraka eo anoloan’ny elo tanteraka voasoratra amin’ny zanany ny mombamomba azy sy ny tsara soatoavina. Izy ireo ihany koa ny hanambara ny ankizy nandritra ny hetsika mba hitady mety ho in-lalàna. Rehefa mitovy no hita, izy dia manohy ny manokana nanangana ny fivoriana ho an’ny ankizy. Ary raha ny fandehany ho tsara, ny fanambadiana dia ho tazonina ao anatin’ny volana. Raha Tandrefana sarobidy ny virjiny dia tsy mitsahatra mihena sy ny vehivavy manana be dia be ny alina iray mijoro fifandraisana amin’ny olona samy hafa, vehivavy Shinoa mihevitra tena ny virjiny sata. Hatramin’io andro io, mbola virjiny iray amin’ireo zava-dehibe ireo zavatra araka ny kolontsaina. Ao amin’ny olona maka vehivavy virjiny, izany dia midika hoe ny tanjona farany ny fifandraisana dia ny fanambadiana. Vehivavy shinoa ihany no manome ny virjiny iray tena tiany, na ny iray dia azo antoka ny hanambady any amin’ny ho avy. Izany dia tsy misy intsony iombonana amin’ny teny Shinoa mampiaraka ny fahalalam-pomba amin’izao fotoana izao. Fa ny olona sasany izay natao teo ny finoana nentim-paharazana mihevitra fa tsy misy tsara kokoa mifanaraka ho azy ireo hafa noho ny taranaka. Toy izany koa ny fahatakaran-javatra ao amin’ny kolontsaina izany koa dia manohana ny lafin-javatra ho an’ny Shinoa ny daty tsirairay. Tranga vaovao manambara fa ny vehivavy Shinoa tahaka ny daty Tandrefana ny olona. Misy dia maro ireo hevitra raiki-tampisaka ireo izay daty Tandrefana ny olona toy ianao ry zareo mitady lafo vidy ny fiainana sy ny fampiasana ny fanambadiana ho toy ny tapakila avy ao Shina.
Fa izany tsy ny rehetra no marina
Eto aho dia hatolony ny antony sasany izay vehivavy Shinoa ny fitiavana avy amin’ny Tandrefana ny olombelona: Sinoa ny lehilahy ny ankamaroany dia nifantoka tamin’ny manana asa maharitra sy hoavy mamirapiratra. Izy ireo an-tsaina afa-tsy ny zavatra ilaina ara-bola nefa tsy manana eritreritra ny mankafy ny fiainana. Izao no mahita vehivavy Shinoa amin’ny Tandrefana ny olona. Izy ireo manana fomba fijery malalaka kokoa eo amin’ny fiainana fa ny maha-marin-toerana ara-bola dia tsy ny tanjona lehibe indrindra eo amin’ny fiainana. Kosa, dia velona ho sambatra sy hankafy ny fiainana no zava-dehibe kokoa. Izany toetra iray mahatonga ny vehivavy Shinoa fitiavana Tandrefana ny olona. Ao Shina, rehefa ny vehivavy manana maizina lasa ny fifandraisana toy ny fisaraham-panambadiana izany dia heverina ho toy ny henatra. Noho izany, ny fiaraha-monina sy ny mpiara-miasa ho avy ny fananana ny fotoana sarotra ny manaiky izany. Ho an’ny Tandrefana ny olona, ny fifandraisana teo aloha dia tsy mba ho menatra. Izy ireo hanaiky ampahibemaso ny mpiara-miasa ao anatin’ny fifandraisana ary ny fandrosoana miaraka ny ho avy miaraka aminy. Ho an’ny vehivavy Shinoa, dia misy zavatra ho izy ireo tsy hahita ny kolontsaina. Rehefa tonga ny ady, lehilahy Sinoa no mampiavaka ny fandavana izay hevitra avy amin’ny mpiara-miasa. Ny foana-fandraisana ny hitarika saika ny zava-drehetra toetra miendrika azy ireo ho amin’ny fanapahan-kevitra ny mpanao, anisan’izany rehefa misy ady eo amin’ny mpivady hitranga. Western lehilahy, ny mifanohitra amin’izany, vonona hihaino ny mpiara-miasa sy hamaha ny olana miara. Ny fiarahana amin’ny fomba mafy voasariky ny kolontsaina izay ireo monina any na hitombo. Eo amin’ny Andrefana sy Atsinanana, ny fifandraisana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy dia jerena avy amin’ny teboka. Indrindra ao Shina, izay Shinoa mampiaraka ny fahalalam-pomba mbola mandeha mafy hatramin’io andro io. Na izany aza, dia tsy maintsy mandoa ny sasany fanajana sy tsy ambanin-javatra ny kolontsaina
← Top Sinoa Tsara Indrindra Mampiaraka Toerana, Sinoa Mampiaraka Toerana Famerenana
Tsara indrindra ny Lahatsary amin'ny chat Uzbekistan - online dating tsy misy fisoratana anarana →